SOBNI DHIIGA HIN QOORSU -
SOBNI DHIIGA HIN QOORSU
Labsiin doorsisuu kaleessa galgala baafte diddaafi murannoo Oromootaatin kan simatame Wayyaaneen, ammas kijiba biraatin as baate. Kunis ‘biiroon Maastar Pilaani cufame’ kan jedhuudha. Kijiba kanaa kan as baafte kijiba Abbaan Duulaafi Muktaar as fidan ragaa qabatamaa Maastar Pilaaniun hojirra oolaa jiraachuu agarsiisu kaleessa erga maxxansinee booda. Akkuma yaadattan Abbaaan Duulaa ” Maastar Pilaaniin bara 2006 ALH irraa kaasee hamma ummanni mari’atuu dhaabbataa jira jedhee sobe.
Sun soba ta’uu bariisama san ragaan dhufe. Kunis Maastar Pilaniin dhaabbachuu mitii daranuu jabaatee itti fufuuf beeksisa qaxarrii hojii gaazezaa addis Zaman irratti baasuun beekame. Kijibni sun guyyaa adii saaxil baanaan amma kijiba biraa kan sanirra guddaa irratti dabalan. Kunis soba ta’uu maalin beeyna?
Wayyaaneen lafa ummata keenyaa saamuunn hanqatee dhiinga obboleeyyan keenyaa dhugaa jirtu dhugaa Oromootitu joonjessaa burjaajessaa jira.
Previous Ethiopia: Amnesty warns against ‘brutal crackdown’ on protesters
Next Ethiopia: Anti-terror rhetoric will escalate brutal crackdown against Oromo protesters